Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti a bike okpu agha na skate okpu agha? - Jomo Technology Co., Ltd
Power-aka Kid skuuta
Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti a bike okpu agha na skate okpu agha?
A nkịtị ajụjụ ndị mmadụ na-ajụkarị bụ, "Gịnị bụ ihe dị iche n'etiti a bike okpu agha na skate okpu agha?" Wezụga ndị doro anya dị iche na anya, bike na skate okpu agha bụ n'ezie functionally dị iche iche na ọtụtụ ụzọ, na ị ga-achọ ijide n'aka na ọ bụrụ na ị ịzụta nri ụdị okpu agha maka ịnyịnya gị electric skateboard .
I nwere ike ịhụ ihe dị iche na mkpuchi n'etiti a mgbe nile bike okpu agha na otu e mere iji chebe azụ nke isi gị. Image Ebe E Si Nweta: The Sweethome
Otu isi ihe dị iche n'etiti bike okpu agha na skate okpu agha na-n'ezie metụtara ha iche aghụghọ. Kpọdaa okpu agha, nke bụ omenala gburugburu na-eji ire ụtọ, ekpuchi na azụ nke isi gị. Nke a bụ n'ihi na ha na-e na-echebe megide Falls na skateboarders ọtụtụ iri, ebe ha nwere ike adaa na azụ nke isi ha. N'ụzọ dị iche, bikers adịkarịghị ada nke azụ nke ha anyịnya igwe.
N'ihi na ihe electric skateboarder , m ga-ikwu na-a okpu agha nke kpuchiri azụ nke isi gị dị ka a omenala skate okpu agha na-eme. N'ihi na gị na osisi nwere ike mee ngwangwa ngwa ngwa, ị nwere ike-atụba anya na azụ ma ọ bụrụ na ị na echiche hiere ụzọ ole trotul ị na n'itinye.
The ndị ọzọ na isi ihe dị iche n'etiti a mgbe nile skate okpu agha na a bike okpu agha bụ ikike na-echebe megide dị iche iche nke mmetụta. Omenala, na-abụghị gbaara, skate okpu agha na-e na a softer ụfụfụ shei na-echebe megide multiple obere metụtara. N'ụzọ dị iche, a bike okpu agha na-mere nke a ike EPS ụfụfụ na e mere na-ewe otu nnukwu mmetụta na-agbaji, mgbe nke gị mkpa iji dochie okpu agha.
Ọ bụ ezie na omenala skate okpu agha, e maka nkịtị skateboards na Electric longboards , na-emekarị bụghị gbaara, ị kwesịrị ị na-a skate okpu agha na-eji otu ike EPS ụfụfụ a bike okpu agha nwere, nke ka na-echebe ndị azụ nke isi gị. Ị nwere ike mfe agwa nke skate okpu agha na-e otú a site na-eme ji n'aka na ha na-CPSC gbaara.
Gịnị okpu agha m kwesịrị ịzụ?
All nke okpu agha m na-depụtara na m okpu agha ndu bụ CPSC gbaara na e mere iji chebe azụ nke isi gị. Dị ka ogologo oge dị ka ị hụ na ị nwere a gbaara okpu agha na-echebe azụ gị isi, ị ga-ukwuu odi mfe na gị na electric skateboar d.
Post oge: Dec-11-2017
Daalụ maka unu TIME